Sidee Ornela, hooyo firfircoon oo 33 jir ah oo ku nool agagaarka Rungis, u maamushay inay ka bedesho xaaladda Job Seeker una noqoto Kaaliyaha HR hal sano gudahood? Dhammaan inta uu ka qaadanaayo dibloomadiisa IFOCOP, iyo maareynta noloshiisa qoyskiisa isagoon naftiisa galin ceeb dhaqaale? Sida ugu fudud ayaa ah inaad weydiiso su’aasha.
Ornela, waxaad si xoog leh u bilaabeysaa sanadka, maadaama waqtiga wareysigaan aad hada shaqo heshay kaaliye HR ah!
Runtii, waanan ku faraxsanahay (dhoola cadeyn). Tani waxay sii xoojineysaa xukunkeyga inaan sameeyay xulasho sax ah anigoo bilaabay tababbarkayga xirfadleyda ah.
Waxaad raacday koorsada tababarka Kaaliyaha HR ee IFOCOP. Laakiin waa maxay caalam xirfadeedka aad ka timid? Maxay tahay wadadaada tababarka ee bilowga ahi?
Waxaan markii hore naftayda u qaddimay waaxda dalxiiska. BAC-da guud ka dib, waxaan sidoo kale qaaday BTS iibinta dalxiiska iyo wax soo saarka, taas oo nasiib daro aanan u helin fursad aan ku cadeeyo, ka dib isbadal ku yimid noloshayda shaqsiyeed taasoo igu kaliftay inaan ka tago dalkii hooyo ee Normandy ee gobolka Paris. Degdeggii ugu horreeyay wuxuu ahaa markaa shaqo raadinta
Noqoshada Kaaliyaha HR: sida Ornela ay nafteeda ugu yaboohday mustaqbal xirfadeed cusub July 10th, 2021Tranquillus
READ Xirfadaha dhijitaalka ah si ay u hindisaan adduunka berrito
horeMaqnaanshaha BDES: ma sabab u tahay shaqo ka fadhiisin?
socdaLaga soo bilaabo macalin ilaa kaaliyaha maamulka, dib u noqoshada layaabka leh ee Andréa iyada oo ay ugu mahadcelineyso qandaraaska xirfadeed